Olan’ny lasantsy ao India: Enta-mavesatra roa amin’ny fiakaram-bidiny sy ny fitomboan’ny Tinady · Global Voices teny Malagasy
Manahirana ny vahoaka ny fiakaran'ny vidin'ny lasantsy sy ny gazoala
Voadika ny 28 Septambra 2021 4:17 GMT
Toeram-pivarotana solitany be olona any New Delhi, India, tamin'ny taona 2008. Sary tao amin'ny Flickr avy amin'ny IFPRI. CC BY-NC-ND 2.0.
Nahatonga ny Indiana tsy ho tony intsony tato anatin'ny volana vitsivitsy ny fiakaran'ny vidin'ny lasantsy sy ny gazoala. Na dia tsy niakatra nandritra ny 11 andro nisesy aza ny vidiny hatramin'ny 16 septambra, dia saika tsy nitondra fampiononana izany. Tany Delhi, 101,19 INR (1,37 USD) ny vidin'ny litatry ny lasantsy, raha 88,62 INR (1,2 USD) kosa ny litatry gazoala tamin'ny 18 septambra. Mombai, izay ahitana ny vidina lasantsy ambony indrindra eo amin'ireo metros efatra kosa dia 107.26 INR (1.46 USD) ny vidin'ny petrola ary 96,19 INR (1,31 USD) ny litatry ny gazoala, araka ny notaterin'ny toeram-panadiovana solika tantanan'ny fanjakana, Indian Oil. Nanomboka tamin'ny taona 1990 ka hatramin'ny fiakaram-bidy farany tamin'ny taona 2021, nanodinana ny 1.04 USD isaky ny litatra teo ny vidin'ny lasantsy any India.
Inona no mampiovaova ny vidiny?
Nafarana avy any amin'ny firenen-kafa ny 80% mahery amin'ny famatsiana solika mbola tsy voadio any India. Ny vidin'ny solika , ny saran'ny fanafarana, ny haba sy ny tataon-ketra alain'ny fanjakana, ny tahan'ny dolara manoloana ny ropia (dolara no anafarana solika), ny vidin'ny fanodinana, ary ny fitomboan'ny tinady amin'ny lasantsy no antony lehibe mampiakatra ny vidin-tsolika any India.
Na dia manaiky aza ny governemanta fa nisy fiantraikany ratsy tamin'ny vahoaka ny fiakaram-bidin-tsolika, dia manamafy koa izy fa nisy fiantraikany lehibe tamin'ny volam-panjakana ny valanaretina COVID-19 ary manangom-bola hisian'ny drafitra fiahiam-bahoaka ny governemanta. Nisioka ny lahatsarin'ny Minisitry ny holafitry ny Solika, Dharmendra Pradhan mamaly ny fanontanian'ny mpanao gazety ny fantsom-baovao Indiana ANI.
#WATCH (Jereo)| Ekeko fa manahirana ny vahoaka ny vidin-dasantsy amin'izao fotoana izao saingy nandany Rs35.000 crores mahery tamin'ny vaksiny tao anatin'ny herintaona ny fanjakana foibe /fanjakana … Amin'izao fotoan-tsarotra izao, manangona vola izahay holaniana amin'ny drafitra fiahiam-bahoaka: Ny minisitry ny holafitry ny solika Dharmendra Pradhan
Niakatra nandritra ny fitondran'ny governemanta teo aloha ihany koa ny vidin-dasantsy. Nandritra ny fe-potoam-piasan'ny United Progressive Alliance (UPA) teo anelanelan'ny taona 2004 sy 2014, nisondrotra teo amin'ny tsena manerantany niainga tamin'ny 34,16 USD isaky ny barila ka hatramin'ny 110 USD isaky ny barila ny vidin'ny solika, izay niteraka fiakarana avo be tamin'ny vidin-dasantsy. Nampiakarin'ny UPA ny vidin'ny solitany niainga tamin'ny 36 INR ka hatramin'ny 63 INR, ary ny gazoala 23 INR ka hatramin'ny 38 INR. Amin'ny fitondrana ankehitriny, voalaza fa antony lehibe amin'ny fiakaram-bidy ny hetra.
Notsipihan'ireo manam-pahaizana fa, ankoatra ny fiakaran'ny vidin-dasantsy manerantany, nahatonga ny fiakaran'ny tondron'ny vidin'ny lasantsy ny fampiakaran'ny governemanta hatrany ny haba sy ny hetra hafa. Niakatra avo enina heny nanomboka ny taona 2013 ny hetra amin'ny gazoala sy lasantsy, nampitombo ny vidin-javatra antsinjarany ka manavesatra mafy ireo mpanjifa.
Rehefa mandinika ny lafiny tinady isika, dia tsy vaovao amin'India ny olan'ny lasantsy, na dia vokatra azo tamin'ny vanim-potoanan'ny indostria tokoa aza. Araka ny efa nampoizina tamin'ny firoboroboan'ny toekarena haingana an-tanandehibe, nitombo be tanatin'ny efa ho folo taona ankehitriny ny fangatahan'i India lasantsy. Naminavina fisondrotana 12,2 isan-jato amin'ny fangatahana solika amin'ny taom-piasana ankehitriny (2021-22) ny Petroleum Planning and Analysis Cell eo ambany fiahian'ny minisiteran'ny solika sy ny etona voajanahary. Moody's, sampana mpanome naoty isa maminavina fiakarana 14 isanjato mandritra io fe-potoana io ihany. Na izany na tsy izany, tsy maintsy hiakatra ny fanjifana, izay mety hanery ny fitomboan'ny fanafarana solika tsy voadio.
Raha hita ho mariky ny fahaveloman'ny toekarena amin'ny lafiny iray ny fitomboan'ny fangatahana lasantsy, ary mahatonga an'i India ho tsena manintona ireo mpiantsehatra manerantany, etsy an-daniny kosa misy akony lehibe amin'ny volam-bahoaka izany. Mpisera Twitter maro sy mpiantsehatra ara-politika manerana ny firenena no naneho ny ahiahiny amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana, misy mihitsy ny sasany mikarakara hetsi-panoherana.
Nanao fihetsiketsehana nanerana ny firenena nandritra ny 10 andro sy hetsika fanangonan-tsonia ny antoko mpanohitra, Kongresy Nasionaly Indiana tamin'ny volana Jona 2021 mitaky ny fampihenana ny vidin'akoranafo.
Nisioka ny mpitarika ny mpanohitra ao amin'ny fanjakan'i Karnataka hoe:
Tsy manahy momba ny vidin'ny Solitany sy gazoala any amin'ny Fanjakana hafa izahay. Tianay hihena ny vidin'izany ao amin'ny Fanjakanay mba hanampiana ny vahoaka ao amin'ny Fanjakanay.
Mandrisika ny governemanta @BJP4Karnataka aho mba hampihena ny hetra amin'ny Solitany sy gazoala ao amin'ny fanjakanay.
Rehefa nilatsaka ho 30 pais (4 cents) ny vidin-tsolika tamin'ny volana septambra, nanesoeso ilay heverina fa fialan-tsasatra ilay tanora mpikatroka ara-politika Harpreet Singh:
Fanamaivanana lehibe! Aiza no kasainao hampiasàna ny tahirim-bola amin'ny solitaninao?
Ahoana no mampisondrotra ny vidim-piainana izany rehetra izany?
Fantatra taloha fa misy vokany eo amin'ireo sehatra efa voatsindry amin'ny toekarena ny fiakaran'ny vidin-tsolika ary manampy amin'ny Fiakaran'ny Vidin-javatra Ambongadiny (WPI). Misy fiatraikany amin'ny vidin'ny fitaterana vokatra isan-karazany ny fiakaran'ny vidin'ny solitany, ka miantraika amin'ny mpanjifa.
Raha mitohy ny zava-misy ka miakatra ny vidin-javatra antsinjarany sy ny vidin-tsakafo, dia ho voa mafy ny vahoaka ankapobeny. Efa manimba ny sata ara-toekarenan'ny fianakaviana marobe ny valanaretina COVID-19, ary nametra ny fahefa-mividin'ny vahoaka ny fahaverezan'asa na amin'ny sehatra voalamina na tsy voarindra.
Ho atao anatin'ny GST ve ny lasantsy?
Manoloana ny fiakaram-bidy, mieritreritra ny manampahaizana manokana momba ny hetra sy ny Filan-kevitry ny Hetra amin'ny Entana sy Tolotra – Goods and Services Tax (GST) ao India raha azo entina ho ao anatin'ny GST ny solitany. Ny fampidirana ny solitany sy ny gazoala ao anatin'ny GST dia midika fa arakaraka ny fototry ny vidin'ireo entana ireo manerana ny fanjakana rehetra ny hetra mitovy fa tsy hetra manokana alain'ny foibe sy ny fanjakana.
Araka ny fanadihadiana vao haingana nataon'ny sehatra vondrom-piarahamonina media sosialy LocalCircles, 77 isanjaton'ny olom-pirenena no maniry ny hampidirana ny solitany sy gazoala ao anatin'ny GST.
Mpisera Twitter Parijat Moitra manambara ny zava-misy:
Nofinofy fotsiny izany. Ny fampidirana ireo vokatra solika ao amin'ny GST dia tsy hampihena ny vidiny. Raha manangona hetra ny fanjakana sy ny governemantan'ny Firaisana ary be loatra izany, nahoana no ahenan'izy ireo izany?
Na izany aza, nandritra ny fivoriana faha-45 nataon'ny filan-kevitra GST notontosaina tao Lucknow ny 17 septambra 2021, nilaza ny minisitry ny vola Nirmala Sitharaman fa tsy mbola hampidirina anatin'ny GST ny solika sy ny gazoala amin'izao fotoana izao .
Mpisera Twitter SMEsupport naneho hevitra momba ny fanapahan-kevitry ny Filan-kevitra GST toa izao:
Tsy ekena izay rehetra mety hahasoa ny vahoaka. Nolavin'ny @GST_Council ny fitondrana ny lasantsy sy ny gazoala eo amin'ny #GST. Sahirana amin'ny fidiram-bolany fa tsy ny an'ny vahoakan'i India ny rehetra.
Manome sosokevitra ireo manam-pahaizana sasany fa tokony handrisika vahaolana hafa toy ny lasantsy mifangaro etanol sy fiara elektrika i India mba hiadiana amin'ny fiakaran'ny vidin'ny lasantsy.